Banyere Anyị - Qingdao JBD Machinery Co., Ltd
Qingdao JINBEI Machinery Co., Ltd. (na-akpọ Qingdao JBD Machinery Co., Ltd) bụ a sara mbara ụlọ ọrụ tụnyere nnyocha sayensị na mmepe, n'ichepụta, nkà na ụzụ ọhụrụ (alo), mmepụta na ahịa. Anyị idozi na mmepe nke "guzo site quality, ịzụlite site technology, omenala mbụ" ebe ọ bụ na ntọala nke ụlọ ọrụ. Anyị ụlọ ọrụ locates na mara mma obodo Qingdao, Shandong n'ógbè, China.The adaba okporo ụzọ na ebe ndị mara mma na-ewe anyị uru development. Na oké nkwado nke ọtụtụ ahịa na ndị enyi, anyị ụlọ ọrụ na-amalite ngwa ngwa na kpụrụ a otu ụlọ ọrụ na nnyocha sayensị, rụpụta, ahia na debugging.
Mmụba nke ahịa azụmahịa
Creation na ọhụrụ bụ mgbe niile na isi mmụọ nke JINBEI si omenala. Ebe ọ bụ na oruru nke JINBEI, anyị ka na ụzọ ozi green ike. Anyị na-mgbe niile na-esi ọnwụ na elu mma, ala n'efu na ala obibi.
Ngwaahịa & Service
Innovation ụzụ Consultancy
Anyị na-enye na-agba izu na-esonụ chọrọ.
Nka na ụzụ ọkachamara ẹkedori a ọhụrụ osisi / oru ngo
Nka na ụzụ ndụmọdụ na nkwado maka iwebata osisi & ígwè na-aga nke ọma nyere
Nka na ụzụ ize maka ọhụrụ ngwaahịa mmepe
Nye ụzụ Training
Complete atọ akụkụ ntule ọrụ na osisi & igwe iji belata mmepụta na-eri
Anyị bụ ndị mbụ oke nke dị iche iche na ahịa n'ihi na na-esonụ:
Wide nkesa omume netwọk
Usoro ziri ezi n'achụmnta ego
Sara Mbara Ndinam experiance
Bịara n'Ezi Oge nnyefe
Tinye: No.15 Guangdong Road, Beiguan ulo oru Park, Jiaozhou City, Qingdao, China